Umaki: thumela i-slug | Martech Zone
Maka: thumela i-slug
Ngiyethemba ukuthi akusimina ngedwa okukhathaza lokhu, kepha ngiyakuzonda impela lapho ngifaka isigaba kubhulogi leWordPress bese i-URL iphenduka into efana ne- / isigaba-2 /. Kungani i-WordPress Yengeza i--2? Omaki bakho, izigaba, amakhasi nokuthunyelwe kwakho konke kune-slug echazwe etafuleni elilodwa lapho ungeke ube nezimpinda eziphakathi kwalezi zindawo ezintathu. Okwenzeka kakhulu ukuthi unekhasi, okuthunyelwe noma
Ngezinye izikhathi lapho wenza ucwaningo lwamagama asemqoka lapho ubhlolela i-search engine optimization, ungathola ukuthi inombolo ephezulu yabaseshi i-spell-spell noma i-concatenate words. Isibonelo kungaba yi-USS Forrestal kuqhathaniswa ne-USS Forestal. Ukubonisa imiphumela yosesho yamagama apelwe kabi kuyisu elisebenza kahle kakhulu… kepha ungahle ungathandi ukupela igama ngandlela thile kusihloko sakho seposi noma kokuqukethwe kwakho. Ngaso sonke isikhathi, othile uzokhomba iphutha